थाइराइड र डाइबिटिलाई जरै देखि निर्मुल पार्न खानुहोस् यो फल ! नछुटाई पढ्नुहोला – Annapurna Daily
थाइराइड र डाइबिटिलाई जरै देखि निर्मुल पार्न खानुहोस् यो फल ! नछुटाई पढ्नुहोला
On Aug 25, 2021 23,510
एजेन्सी । कुनै पनि फलको सेवन गर्नु मानिसको शरीरको लागी फाइदाजनक हुन्छ । हरेक फलको आफ्नो आफ्नो फाइदा हुने गर्दछन् । किवी,अम्बा,नेसबरी,स्याउ आदि यस्ता फल छन् जसलाई खानको लागी सल्लाह दिने गरिन्छ । तर आज हामी जुन फलको बारेमा कुरा गर्न जाँदछौँ ती फलहरु खानमा स्वादिष्ट हुनुको साथसाथै स्वास्थ्यको लागी पनि एकदमै फाइदाजनक हुने गर्दछन् । अम्बा (बेलाउती)लाई अङ्ग्रजीमा guava भन्ने गरिन्छ ।
बेलाउती खानाले कयौँ बिमारीहरु ठिक हुने गर्दछन् । तपाई यो जानेर अच्चमित हुनुहुनेछ कि यो डाइबिटिज र थाइराइड जस्ता बिमारीलाई सँधै टाढा राख्ने गर्दछ । हेर्ने हो भने सबै मानिसलाई कोही एक न एक बिमारी त भएकै हुन्छ । तर तर दुनियाँ भरमा सबैभन्दा बढि मानिसहरु बिमारी डायबिटीज र थाइराइडको कारणले हुने गर्दछन् ।
मधुमेह र थाइरोइड रोग त्यस्तो हो जसलाई नियन्त्रण गर्नका लागी स्वस्थ जीवनशैली अनुसार जिउँनको लागी सल्लाह दिइन्छ। बेलाउतीको सेवन गरेर, व्यक्ति धेरै समस्याहरु बाट छुटकारा पाउन सक्छन् ।
यस्ता छन् बेलाउती खानुका फाइदाहरु: बेलाउती एक उच्च ऊर्जा खाना हो जसमा धेरै लाभदायक भिटामिन र खनिजहरू पाइन्छन् जुन हाम्रो मुटु, छाला, कपाल, दिमाग र हड्डीहरूका लागि लाभदायक हुन्छन्। बेलाउतीमा भिटामीन B9 पाइने गर्दछ । जसले शरीरको केशिकाहरु र DNA एलाई सुधार गर्नमा सहयोग गर्दछ।
बेलाउतीमा पोटेशियम र म्याग्नीशियम भरपूर मात्रामा हुन्छ जसले मुटु र मांसपेशीहरूलाई बलियो राख्छ। मांसपेशीहरू र मुटुसँग सम्बन्धित रोगहरू बेलाउती खानबाट टाढा रहन्छन्।
भिटामिन सी र एन्टिआक्सिडन्ट्सको उच्च मात्राको कारण, यस फलमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढि हुने गर्दछ। शरीरको कमजोरी हटाउन यो फल भन्दा राम्रो अरु कुनै फल छैन। यसको सेवन गरेर, तपाईंको शरीरको थकान हटाइनेछ र नयाँ ऊर्जा आउन शुरू हुनेछ।
यस फलमा अवस्थित भिटामिन सीले हाम्रो शरीरको आइरनलाई सोस्ने गर्दछ । जसको कारण यो फल एनीमियाका बिरामीहरूको लागि वरदान साबित हुने गर्दछ ।
शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्दा रोगहरूको खतरा बढ्दै जान्छ । बेलाउती खानाले कोलेस्ट्रोल नियन्त्रणमा रहन्छ। यसको नियमित सेवनले शरीरबाट नराम्रो कोलेस्ट्रॉलको मात्रा कम गर्दछ र राम्रो कोलेस्ट्रोल बढाउँदछ।
बेलाउतीमा भिटामिन ए र ई पाइन्छ जसले आँखा, कपाल र छालालाई पोषण दिने काम गर्दछ।यसमा फाइबरको उच्च मात्रा हुन्छ जुन मधुमेह बिरामीहरूका लागि लाभदायक हुन्छ।
बेलाउँतीमा ओमेगा ३ फ्याटका एसिडहरू हुन्छन् जुन हाम्रो मुटुको लागि लाभदायक हुन्छ। यसले हाम्रो शरीरमा रगतको संचारलाई सुधार गर्दछ।बेलाउतीले थाइराइडलाई पनि नियन्त्रण गर्दछ। सामान्य थाइराइडमा, डाक्टरहरूले प्राय: बेलाउती खाने सल्लाह दिन्छन् ।